थप हवाईमार्गबारे नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय छलफल शुरु, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
थप हवाईमार्गबारे नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय छलफल शुरु
काठमाडौँ । नेपाल र भातरबीच थप हवाईमार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा आजदेखि द्विपक्षीय छलफल शुरु भएको छ।
हवाई यातायात थप सहज र सरल बनाउने लक्ष्यका साथ नेपालले थप हवाईमार्ग उपलब्ध गराउन लामो समयदेखि प्रयास गर्दै आएका सन्दर्भमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) र भारतको ‘एयरपोर्टस् अथोरिटी अफ इन्डिया (एएआई) प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा नेपाली पक्षका तर्फबाट प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक एवं एयर नेभिगेशन प्रमुख नरेन्द्रबहादुर थापा र भारतीय पक्षको नेतृत्व एयर नेभिगेशन प्रमुख एके दत्तले गरेका छन्।
आज प्रारम्भिक रुपमा छलफल शुरु भएको जानकारी दिँदै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण९क्यान०का उपकार्यकारी निर्देशक राजन पोखरेलले शुक्रबार महत्वपूर्ण निर्णय हुनसक्ने जानकारी दिए।
नेपाल प्रवेश गर्ने एउटा मात्र हवाईमार्गका कारण भोग्नुपरेको जटिलताले वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले थप व्ययभारसमेत व्यहोर्नुपरिरहेको छ।
सिमराको आकाशबाट मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका जहाज काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने गरेका छन्। सरकारले लामो समयदेखि भारत सरकारसँग ‘ट्रान्स हिमालय टु’ र अन्य चार स्थानबाट नेपाल प्रवेश गर्ने र बाहिरिने मार्ग उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आएको थियो।
ती विषयमा भारतीय अधिकारीसँग छलफल शुरु भएको उपमहानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए। गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको भारत भ्रमण र गत वैशाख २८ र २९ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभएको नेपाल भ्रमणका क्रममा थप हवाईमार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा भएको सहमतिका आधारमा आगामी छ महिनाभित्र थप हवाईमार्गका बारेमा सहमति जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ।
भैरहवामा गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण भइरहेको र आगामी एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सो विमानस्थल सञ्चालनका लागि थप हवाईमार्गमा सहमति हुनु जरुरी छ।
भारतले हवाईमार्ग नदिँदा सो विमानस्थलमा जहाज उडान तथा अवतरणका लागि समेत समस्या पर्ने देखिन्छ। यस्तै बाराको निजगढमा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत जहाज उडान तथा अवतरणका लागि भारतको आकाश प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
नेपाल सरकारको पटक पटकको आग्रहपछि भारतीय पक्ष थप हवाईमार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा सहमत भएको छ। राजनीतिक एवं कूटनीतिक तहमा भएको सहमतिअनुसार द्विपक्षीय वार्ता शुरु भएको हो। हाल भारत हुँदै आएका विमान एउटा विन्दुबाट मात्र नेपाल प्रवेश गर्छन्।
भारत, हङ्कङ, थाइल्याण्ड, बङ्गलादेश, मलेसिया, सिंगापुरलगायतबाट आउने जहाज सिमरा नजिकै रहेको रोमियो केन्द्र भएर प्रवेश गर्ने गरेका छन्। नेपालबाट बाहिरिनका लागि भैरहवा, भीमदत्तनगर, सिमरा, जनकपुर र विराटनगरको आकाश प्रयोग गर्नुपर्छ।
चीनबाट नेपाल भित्रिने जहाज भने सगरमाथा केन्द्र हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन्। थप हवाईमार्गका बारेमा सहमति हुने जनाउँदै नेपालको निजी क्षेत्रको वायुसेवा प्रदायक बुद्ध एयरले नेपालगञ्ज–दिल्ली उडान गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलबाट भारतीय शहरमा उडान गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ। सो लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि थप हवाईमार्गको जरुरी छ।
भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणका क्रममा भएको छलफलपछि जारी १६ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा हवाईमार्गको विषय समेटिएको छ।
सहमतिमा नेपालका र भारतीय प्रधानमन्त्रीले आआफ्ना देशका प्राविधिक टोलीसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिएका थिए।